आज सोमबार : जीवनमा अधुरा नछोड्नुस् यस्ता काम! « Nipolnews
सुखी जीवनको चाह कसलाई नहोला ? तर सबैले सफलताको स्वाद आस्वादन गर्न पाउँदैनन् । यद्यपी हिन्दू शास्त्रमा धेरै नियम र उपायहरु रहेका छन्, जसको कारण जीवन सुखी हुन्छ भनिएको छ । बिहानको यो प्रहरमा तपाईले प्रकृतिलाई आफू जीवित हुनुको धन्यवाद र कृतज्ञता दिनु, सबैको भलोसोच्नु, पुजाआराधना गर्नु, भजनकिर्तन गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै आजको दिन केहि कुरा टुंग्याउँछु भनेर संकल्प गर्नुपर्छ ।
यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिएका केहि नियमहरुको सही पालनाले तपाईको जीवन सुखमय रहन्छ । गरुड पुराणमा यस्ता चार प्रकारका कामको वर्णन पाइन्छ जुन स्त्री वा पुरुष दुवैले कहिल्यै अधुरो छोड्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।